१ करोड नाकको मूल्य हुने पत्रकार बिराट अनुपमको बयान पढ्नुहोस - Livenp
१ करोड नाकको मूल्य हुने पत्रकार बिराट अनुपमको बयान पढ्नुहोस
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:३९
मैले बुझेदेखि इटहरीमा स्थानीय सरकारको भ्रष्टाचार र भूमाफियाविरुद्ध कलम चलाएँ। तर आज ममाथि नै भूमाफिया र भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई ‘सहयोग गरेको’ आरोप लागेको छ। र मैले सबैभन्दा बढी त्यसको खण्डन गर्नुपरिरहेको छ यतिबेला। सामाजिक सञ्जालमा अनगिन्ती ट्रोल चलिरहेका छन्। मेरो नाकको मूल्य १ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको र मैले भ्रष्टहरूलाई सहयोग गरेको जस्ता आरोप सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन्।
कतिपयले नियोजित रूपमा इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको पक्षमा लेखिरहेका छन्। मेयरले भ्रष्टाचारविरोधी विचार राखेका कुरामा भावुक भएर पनि अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। ममाथि ‘झोले पत्रकार’, ‘भ्रष्टाचारीको सहयोगी’, ‘भूमाफियाको सहयोगी’ जस्ता आरोप लागिरहेको छ। दुवैतर्फ वास्तविकता बुझ्नेहरूले भने तथ्यपरक विचार बनाएका छन्।
म विकल्प नभएर पत्रकार बनेको हैन
म विगत एक दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा जोडिए पनि फुलटाइमर भएर काम गरेको सात वर्ष भयो। त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्स सकेर म पत्रकारिता क्षेत्रमा आएको हुँ। जिन्दगीमा कुनै विकल्प नभएर हैन। विकल्प त्यागेर पत्रकार भएको मलाई पत्रकारिताबाट भ्रष्ट र माफियाहरुको सहयोगी बन्ने कल्पनासम्म छैन। म भ्रष्टाचारी र भूमाफियाको पक्षमा छु वा छैन मैले गरेका समाचारजन्य कामदेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार नै पर्याप्त छन् बुझ्नका लागि। इटहरीका मेयर चौधरीको कार्यकाल सुरु भएपछिका सन्दर्भ मात्र यहाँ चर्चा गर्दैछु।
चर्चा किन आवश्यक देखिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा नाक भाँच्ने थ्रेटलाई विषयान्तर गर्न ‘एन्टी थेसिस’ बनाइएको छ यतिबेला। जसका एक हर्ताकर्ता छन् दिल निशानी मगर। उनले इटहरीका मेयर र मेरा बारेमा भित्रैसम्म बुझेको झैँ गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘इटहरीमा मुकाम बनाएर बस्ने एउटा समूहले सार्वजनिक जग्गालाई आपूmहरुको बनाउन भरपूर प्रयोग ग¥यो। तर, त्यो प्रयासलाई द्वारिकलाल चौधरीले असफल बनाइदिए। अन्ततः त्यो समूह भूmटो आरोप लिएर अख्तियार पुग्यो। अख्तियारले मेयर चौधरीलाई दोषी भेट्टाउन सकेन। सफाइ दियो। चौधरीलाई जेलमा सडाउने माफियाहरुको पहिलो प्रयास अख्तियारको निर्णयसँगै स्वतः असफल भयो। अख्तियारले मेयरकै पक्षमा फैसला गरेपछि जग्गा माफियासँग अन्तिम विकल्प थियो– मेयरको चरित्र हत्या। त्यसका लागि उनीहरूले पत्रकारको दुरुपयोग गरे।’
यो यही ‘दुरुपयोग’ को भासमा मलाई जोडेर माफियासँग मिलेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। गलत कुरा भावुक भएर कसरी भाइरल हुँदो रहेछ भन्ने विषयको साक्षी म आफँै बन्न पुगेँ। अब माफियासँग मैले पत्रकारिताबाट गरेको खबरदारीको सन्दर्भतर्फ लागौं।
२०७४ साउन १ गते चौधरी मेयर भएर आएपछि पहिलो नगरकार्यपालिका बैठक बस्यो। बैठकले बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक घुम्ती शौचालय बनाउने र हेल्लो मेयर सञ्चालन गरेर जनताको गुनासो सुन्ने निर्णयउ भयो। यसको समर्थनमा मैले समाचार बनाएँ। चुनाव लड्दादेखि नै चौधरीले सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्छु भनेका थिए। कर्मचारीतन्त्रबाटै २०७३ सालमा इटहरीको सार्वजनिक जग्गाको एकखाले तथ्यांक आएको थियो। इन्जिनियर विकास भट्टराई र कर्मचारी गायत्री लम्सालको नेतृत्वमा भएको सार्वजनिक जग्गा छानबिनमा ९ सय ९५ बिघा ६ कट्ठा भेटिएको प्रतिवेदन तयार भयो।
यही जग्गा खोजीमा रहेको बताउँदै आएका मेयर चौधरीले डोजर चलाउने बताए। नभन्दै उनले २०७४ साउन १९ गते इटहरीको स्वार्सेकाली पम्प क्षेत्रमा खोला मिचेर बनाइको टाटा कम्पनीको कल्भर्टमा डोजर चलाए। मैले समाचार लेखेँ। यस्तै, मेयरले सोही वर्ष माघ अन्तिम साता इटहरी वडा नम्बर ४ र ५ को सिमाना भएर बग्ने खेती खोला मिचेर बनाइएका संरचनाको अध्ययन गरेर फागुनमा डोजर चलाए। त्यसको पक्षमा पनि मैले समाचार लेखेँ।
पछि एकाएक डोजरको मिसन पूरा नभई बन्द भयो। किन बन्द भयो डोजर भन्दै मैले काम गर्ने इटहरीको तत्कालीन दैनिक पूर्वीबजार र ललितपुरको अनलाइनखबर डटकममा खबरदारी गर्ने समाचार पनि बनाएँ। सामाजिक सञ्जालमा पनि भूमिपुत्र भएर किन भूमाफियाको फाइदा हुने गरी डोजर रोकिएको भन्दै सबैभन्दा धेरै दबाब दिएँ कलमबाटै।
दुई ठाउँमा डोजर चलाउँदै बिटुलो पारेर मेयरले अब इटहरी ९ को डिभिएम स्कुलमा मिचिएको संरचनामा डोजर चलाउने भने। मैले उनको सकरात्मक पक्षको समाचार सक्रियतापूर्वक आफ्नो मिडियामा लेखेँ। डिभिएमा मिचिएको क्षेत्रमा घेराबारा गर्दा स्कुलले भत्कायो। मेयरको काममा असहयोग ग¥यो। त्यसको खबरदारीमा मैले काम गर्ने प्रादेशिक अनलाइन प्रदेशपोर्टल डटकममा प्रमुखताका साथ समाचार लेखेँ।
मेयरको सार्वजनिक जग्गा खोजीमा मैले समाचारदेखि सामाजिक सञ्जाल सबैतिर सहयोगी कुरा लेखेको छु। म कसरी भूमाफियाको सहयोगी? सार्वजनिक जग्गा खोसेर फलैँचा, पार्क र खुला स्थान बनाऊ भनेर मैले मेयरसँग पटकपटक कुरा गरेको छु। म कसरी भूमाफियाको सहयोगी? इटहरीको टेंग्रा खोलाको मुहान जोगाएर अतिक्रमित संरचना भत्काएर जलविहार गराउनुपर्छ भन्दै खोलामा ¥याफ्ट लगाएर अभियान चलाउने म कसरी भूमाफिया सहयोगी?
अर्को कुरा छ भ्रष्टाचारी कर्मचारीको। इटहरीमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछिको सिएफएल बल्ब खरिदमा अनियमितता भएको थियो। कर्मचारीतन्त्रबाट हुने उक्त काममा बजार मूल्यभन्दा धेरै रकममा खरिद गरेको भनेर कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मै हुँ। मेरा बाइलाइन समाचार हुन्। सिएफएल बल्ब खरिद प्रकरणमा उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दीपक गौतमले बनाएको छानबिन प्रतिवेदनले पनि ३० प्रतिशत बढी मूल्य परेको र अनियमितता भएको निर्णय गरेकै हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको भनेकै हो। मेयरले पनि कर्मचारीका कारण भ्रष्टाचार भएको भनेकै हनु। यसै विषयमा मेयरले कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरुप फाँट सरुवा गरेकै हुन्। त्यसको पक्षमा पत्रकार सम्मेलन देखि समाचार उठाउने मै हुँ। अनि म कसरी भ्रस्टाचारी ?
हाम्रो विश्लेषण :
इटहरीमा मेयर बन्नको लागि तात्कालीन एमालेबाट दुई गुट प्रतिस्पर्धी थिए। एकजना रामप्रसाद चौलागाई र अर्का अहिलेका मेयर द्वारिका चौधरी। यी दुई बीच द्वन्द यति चर्को थियो कि चौधरीको शपथ कार्यक्रमका बेला मेयर चौधरीले अर्का एमाले नेता चौलागाई लाई हातपात गरेका थिए।
कुरा बुझ्दै जादा इटहरीका मेयरको कुण्ठा पार्टी भित्रकै गुट उपगुटबाट शुरूभयको आपसी खिचातानीको पराकाष्टा रहेछ यो कुनै ठूलो भ्रष्टाचार बिरूद्धको बहादुरी हुदै हैन । बरु कमाउने धन्दामा एकले आर्कोलाई खुईल्याउन न्वारन देखीको बल निकालेर आपसमा मज्जाले लड्दा रैछन् कम्युनिस्ट नेताहरु भन्ने दरो प्रमाण चाहिं हो यो। अहिले चाही द्वारिका चौधरीको उद्दण्ड स्वभावलाई भजाएर पत्रकारिता माथि लादन खोजिएको मिडिया काउन्सिल बिधेयक को बिरोध गर्ने हतियारको रुपमा मेयर चौधरीलाई उपयोग गर्न खोजिएकोमा कुनै शंका छैन। दूधको साक्षी बिरालो भने झैँ , नेपाल जस्तो भ्रस्टाचारीले जालो लगाएको देशका मेयरलाई भ्रस्टाचार बिरोधी अभियन्ता भन्ने जस्तो लहै लहैमा नलागौं। उनको पनि छानबीन हुनु पर्छ।